काठमाडौं फर्केसँगै विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी
नेपाली महिलालाई यौन शोषण अभियोगमा सोधपुछ
काठमाडौं, भदौ २४- कूटनीतिक तहबाट दुई नेपाली महिलामाथि भएको यौन शोषण एवं मानव तस्करीको अभियोगबारे विदेश मन्त्रालयले नेपाली दूतावासका अधिकारीलाई बुधबार साउथ ब्लकमा बोलाएर छलफल गरेको छ।
राजदूत दीपकुमार उपाध्यायका अनुसार विदेश मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै भारत सरकारले कूटनीतिक मामलाको यो विषयमा थप निर्णय गर्नेछ। छलफलमा विदेश मन्त्रालयमा नेपाल मामला हेर्ने सहसच
भाडा घटाउने सहमति
काठमाडौं, भदौ २२ -यातायात व्यवसायी सहरी क्षेत्रमा गुड्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा २.२२ प्रतिशतले घटाउन राजी भएका छ। व्यवसायी र सरकारबीच सोमबार भएको बैठकमा उक्त सहमति भएको हो।
बैठकमा सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा २.२२ प्रतिशतले घटाउन प्रस्ताव गर्यौ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, व्यवसायीले यसमा सहमत भए। सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्ने विषयमा भौतिक तथा य
नेपाली महिला तस्करी गरी यौन शोषण गर्नेलाई पक्रन आदेश
काठमाडौं, भदौ २३- दुई नेपाली महिलामाथि भएको यौन शोषण एवं मानव तस्करीको अभियोगमा आरोपित साउदी कुटनीतिक अधिकारीलाई पक्राउ गर्न र हदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ‘वारेन्ट’ जारी भएको छ ।
साउदी अरेबियाको दिल्लीस्थित दूतावासका काउन्सेलरले विगत ५ महिनायता दुई नेपाली महिलामाथि गरेको तस्करी अभियोग र यौन प्रकरण आधारमा सोमबार यो प्रकरण प्रहरी कारबाहीमा बाहिर आएको हो ।
माइती इन्डियाको सहयोगमा हरियाणा, ग
बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई मद्धत गर्न अघि सरे पुन
काठमाडौं, भदौ २२- विदेश जाने तरखरमा हुनुहुन्छ ? फरक पृष्ठभूमि र बिरानो भूमिमा कसरी समायोजन हुने भन्ने तनावमा रहने जो कोहीका लागि अब विदेश जाँदा, त्यहाँ बस्दा र कमाइ पठाउने बेला अतिआवश्यक सूचना पाउन सहज हुँदैछ।
हुन त अहिलेसम्म सरकारी तथा विभिन्न मेनपावर कम्पनीले विदेश जान खोज्ने युवायुवतीलाई सक्दो परामर्श दिइरहेको भेटिन्छ। तैपनि बिदेसिएका ठूलो संख्याका युवायुवतीले सामान्य सूचनाको अभावमा अनाहक ज्या
कहाँ खर्च भयो खाडीका दुतावासबाट सात करोड ?
मोटरसाइकलमा झण्डै ३० किलो चाँदी
भारतीय मजदुरले धानेको नेपालको उद्योग
ति १२ हजार व्यक्ति अव कसरी जाने विदेश ?